Taphataa Kubbaa Miilaa Cimaa Afrikaa BBC 2017: Taphataan biyya Masrii, Mohaammad Saalaah badhaasa kana fudhate. - BBC News Afaan Oromoo
Taphataa Kubbaa Miilaa Cimaa Afrikaa BBC 2017: Taphataan biyya Masrii, Mohaammad Saalaah badhaasa kana fudhate.
Goodayyaa suuraa Saalaan kilaba isaatiif tahe, garee biyyoolessaa isaatif waan guddoo dalage
Taphataan biyya Masrii, Mohaammad Saalaah Taphataa Kubbaa Miilaa Cimaa Afrikaa BBC 2017 ta'uun filatame.
Erga filannoo lakkoofsa rekoordiin booda, taphataan Liivarpuul cimaan kun moa'ateera. Innis taphataa Gaaboon Piyer-Emerik Obaamaayaang, taphataa Giinii Nabii Keettaa , taphataa Seenegaal Saadiyoo Maanee fi kan Naayijeeriyaa Viktar Mosis dursuuni.
''Badhaasa kana mo'achuu kootti guddoon gammade,'' jechuun taphataan ganna 25 kun BBC Sport'if hime.
''Waan tokko wayita mo'attu miira addaatu sitti dhagahama. Waggaa kanatti akka waan dansaa tolchite sitti dhagahama. Kanaaf baay'een gammada. Bara itti aanus mo'achuun barbaada!''
Galchii 13'n, goolii galchaan ol'aanaa Primeer Liigii Ingiliiz Saalaah, kilabasaa fi biyyasaaf yeroo gaarii dabarsaa jira.
Jalqaba 2017tti, wayita biyyisaa Masrii, Waancaa Afrikaarratti lammaffaa ta'uun wayita xumurtu, shoora olaanaa taphateera.
Gaaffiifi deebii Mo'ataa Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa
Gara xumura bara kanaatti ammoo, taphataan fuulduraa saffisaan beekamu kun, Fara'oononni (maqaa masoo garee biyyaalessaa Masrii) Waancaa Addunyaa Raashiyaaf akka qaqqaban guddoo gumaacheera. Galchiiwwan torba Fara'oononni lakkoofsisan hunda keessatti qooda qaba ture.
''Taphataa Masrii yomiyyuu ajaa'ibsiisaa ta'uun barbaada, kanaaf cimeen hojjedha,'' jedha Saalaah. Taphataa Masrii badhaasa kana mo'ate sadaffaa ta'eera, kunis erga 2008 as isa jalqabaati.
''Yeroo mara karaa koon hordofa, warri Masrii keessaa hunduu faana koo akka bu'aniin barbaada.''
Saalaan kilaba isaatiif tahe, garee biyyoolessaa isaatif waan guddoo dalage.
Xaaliyaanitti kilaba Roomaaf galchii 15 lakkoofsise, 11 ammoo mijeessee dabarsuun, kilabni isaa Serie A lammaffaa akka xumuran gargaare. Kunis waggoota torba keessatti isa jalqabaa ture.
Erga Livarpuul dhufe ammoo, taphoota jalqabaa 16 keessatti, galchii 13 lakkoofsiseera.
''Waahilota koo Liivarpuul keessaa galateeffachuun barbaada, kana malees kanneen Roomaa keessa jiranis nan galatteeffadha, yeroo bareedaa ta'e dabarseera. Akkasumas taphattoonni garee biyyooleessaa galatoomaa,'' jedhe Saalaah.
Goodayyaa suuraa Erga Livarpuul dhufe ammoo, taphoota jalqabaa 16 keessatti, galchii 13 lakkoofsiseera.
''Ergan as dhufee, cimee hojjachuun kubbaa miilaa dansaa akkan beeku agarsiisuun barbaada. Priimeer Liigiitti deebi'ee dhufuu koottis baay'een gammada.''
Saalaan, waqtii Primiyeer Liigii kanaatti guddoo nu ajaa'ibsiise. Bara 2014-15 keessa Cheelsii waliin ture sanatti, guddoo hin milkaa'in hafeera.
''Guddoo isaaf mala,'' jedhan leenjisaan Liivarpuul Yargan Kiloopp, wayita badhaasicha iddoo leenjii kilabichaa Melwuuditti kennaniif.
''Ani nama carra-qabeessa. Taphattoota guddoo milkaa'an waliin hojjechuuf carraa argadheera. Ammammoo Moo waliin hojjechuu kootiif hedduun gammada.
''Wanti gaariin, inni ammallee dargaggeesa. Of fooyyeessuuf carraa hedduu qaba. Humnas qaba. Isa waliin hojjechuu kootiif, hedduun gammada.''
Saalaan amma taphattoota Afriikaa keessaa maqaa guddaa qaban kanneen akka: Abedii Peelee, Joorg Wiihaa, Jey-Jey Okochaa fi Didiyeer Droogbaa waliin ramadameera - badhaasa Taphataa Kubbaa Miilaa Cimaa Afrikaa BBC 2017 fudhachuun.
''Badhaasa kana mo'achuun isaan waliin ramadamuu kootiif hedduun gammada,'' kan jedhu Saalaah, taphattoota Masrii Mohaammad Barakat (2005) fi Abootrikaa (2008) waliin badhaasa kana qooddateera.
Badhaafamtoota Taphataa Kubbaa Miilaa Cimaa Afrikaa BBC kanaan duraa:
2016: Riyaad Maahrez (Lesiistar Siitii & Aljeeriyaa)
2015: Yaayaa Tuuree (Maanchastar Siitii & Ayivoorii Koost)
2014: Yaasin Braahimii (Poortoo & Aljeeriyaaa)
2013: Yaayaa Tuuree (Maanchastar Siitii & Ayivoorii Koost)
2012: Kriis Kaatongoo (Henaan Konstrakshin & Zaambiyaa)
2011: Andiree Ayyew (Marsee & Gaanaa)
2010: Asamowaah Jiyaan (Sandarlaand & Gaanaa)
2009: Diidiyeer Drogbaa (Chelsii & Ayivoorii Koost)
2008: Mohaammad Abutriikaa (Al Ahlii & Masrii)
2007: Imaanu'el Adebaayor (Arsanaal & Toogoo)
2006: Maaykil Isiyen (Chelsii & Gaanaa)
2005: Mohaammad Barakat (Al Ahlii & Masrii)
2004: Jey-Jey Okoochaa (Boltan & Naayijeeriyaa)
2003: Jey-Jey Okoochaa (Boltan & Naayijeeriyaa)
2002: El Hajii Diwuf (Livarpuul & Seenegaal)
2001: Samii Kufoor (Baayer Muunik & Gaanaa)
2000: Paatrik Mboomaa (Paarmaa & Kaameroon)
Kaadhimamtoonni Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017 ifa tahan